नगरपालिका भित्र विश्व स्वास्थ्य दिवशको तामझम, खोप केन्द्रमा नाबालकहरुको बिचल्ली - Pradesh Dainik
नगरपालिका भित्र विश्व स्वास्थ्य दिवशको तामझम, खोप केन्द्रमा नाबालकहरुको बिचल्ली
विश्व स्वास्थ्य दिवश प्रत्येक वर्ष मार्च ७ अर्थात विश्व स्वथ्य संगठन स्थापना भएको दिन भनाइने गरिन्छ । सोही अवसरमा मोरङको पथरीशनिश्चरेमा विश्व स्वास्थ्य दिवश नगरको सभाहलमा निकै तामझामका साथ मनाइयो ।
निर्धारित समय भन्दा निकै ढिलो गरेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा नगरका महिला स्वास्थ्य सयम् सेविका, नगरका स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य प्रमख तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती थियो । कार्यक्रम समापनका क्रममा नगर परिक्रमा समेत गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य रहनका लागि निकै आदर्शका कुराहरु गरिए । म यो गर्दिन त्यो गर्दिन तर सोही समयमा नगरपालिका कार्यालयसंगै जोडिएर रहेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको हालत भने अचम्मको थियो ।
१ महिना देखि १५ महिना सम्मका बालबालिका बोकेर घटौँ सम्म लाइनमा उभिएका अभिभावकका अनुहार मलिन थिए । चैतको तातो घाममा यसरी घटौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता त छदैँ थियो । खेप लगाउन आउदाँ बस्नका लागि केही पनि व्यवस्थापन गरिएको छैन् । वडा नं. १० बाट आएका संचमाया राई र बिमला मगरले चाहीँ घरबाट नै भुइमै बस्नका लागि भएपनि म्याटेस लिएर आएका थिए । बच्चा बोकेर लाइनमा बस्न पनि सकिदैन, बस्ने ठाउँपनि छैन् त्यही भएर घरबाटै म्याटेस लाएर आएको उनिहरुले बताए ।
वडा नं. १ का कमलेस सहनीले पनि ४ महिनाको नानी लिएर २ घण्टा देखि लाइनमा बसेका थिए । महिनाको २४ गते जहिले यस्तै भिड हुने कमलेसले बताएइ । कम्तीमा बस्ने ठाउँभए सजिलो हुन्थ्यो हामी त जसो जसो उभिन सक्छौँ तर बच्चालाई निकै गाह्रो हुन्छ । यस विषयमा नगरले पनि चासो दिनुपर्ने हो तर खासै वास्ता गरेको नलागेको कमलेसले बताए ।
न त कुनै सितल छहारी छ न बस्ने ठाउँ नै स्वास्थ्य केन्द्रको भ¥याङ, छेवैमा रहेको होटलको पिढीमा बालबालिका बोकेर केही अभिभावकहरु वसिरहेका थिए । केही अभिभावक भने असिन पसिन भएर तातो घाममा उभिरहेका थिए ।
अघिल्लो दिन २३ गते वडा नं. २ को पथरी स्वास्थ्य चौकीमा खोप लगाउन छुटेकाहरु पनि आएकाले अझ भिड बढेको केही अभिभावकले बताए । २३ गते २ बजे खोप लागाउन पुग्दा स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी नै नभएकाले त्यसै फर्किनु परेको अभिभावको गुनासो थियो । सिटीमा भाडा तिरेर गयौँ तर स्वास्थ्य चोकीमा कार्यालय सहयोगी बाहेक कोही थिएनन् एक अभिभावकले भनिन् ।
यस विषयमा नगरका स्वास्थ्य सह–संयोजक जगत ममगरसंग बुझ्दा त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरेर कार्वाही गर्ने बताए । उनले भने “४ बजे सम्म कर्मचारीहरु बस्नुपर्ने हो यदी त्यसरी अगाडी नै हिडेका रहेछन भने हामी कार्वाही समेत गछौँ ।” सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका विषयमा भने भर्खरै शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा विकास भएकाले विस्तारै समस्याहरु समाधान हुदैँ जाने भन्दै मगर तर्कीए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हुदाँ त यतिका भिड हुने ठाउँमा झन स्वास्थ्य चौकी नै त्यहीँ हुदाँ कति भिड हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यता वडा नं. १ का अध्यक्ष बाबुराम एङ्देनले आफुले नगर कार्यपालिकामा विरामी बस्ने टहरा भएपनि निर्माण गर्नुपर्ने कुरा पटक पटक उठाउदाँ पनि सुनुवाइ नभएको बताए । भाषणमा आजका बालबालिका भोलीका देशका कर्णदार भन्दै चिच्याउने जनप्रतिनिधिहरुले पनि यस विषयमा किन ध्यान दिन सकेनन् ? नावालक बच्चा बोकेर लाइनमा बसेका सुत्केरी आमहरुको हालत कस्तो होला यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरुले सोच्ने की नसोच्ने ?